Qamadi ciriiri | November 2019
Ugu Weyn Ee Qamadi ciriiri
Yaa iyo waxa waxyeeleeya raspberries
Raspberries waa dhaqan ku nool sida baradho leh yaanyo. Sidaa daraadeed, waxay u egtahay fayrasyo, bakteeriyo iyo cayayaanka oo si weyn u dhaawici kara dhirta. Way fiican tahay in la ogaado oo looga hortago horumarinta cudurka waqti ka badan inta ay sugaan illaa ay ka gudbaan naftooda. Cayayaanka iyo cudurrada qaarkood waxay u horseedi karaan burburinta duurka, taas oo noqon doonta mid aad u xun oo adiga kugu haboon.
Waa maxay sababta caleemaha geranium noqdaan huruud ah, daaweynta germanyum
Waa ammaan in la yiraahdo qof walba wuxuu leeyahay gurigiisa, laakiin dadkeennu waxay leeyihiin jacayl gaar ah oo loogu talagalay geranium. Ma taqaanaa? Gerani waxaa loo yaqaan 'pelargonium'. Cayayaanka ugu muhiimsan ee Geranium, sida geedka kale, waxay leedahay cadow badan. Cudurada kala duwan iyo cayayaanka ayaa sababi kara dhaawac halis ah oo u geysta qolka qolka.
Dhibaatooyinka Chubushnik sii kordhaya ee goobta
Chubushnik waa warshad ka tirsan qoyska Hortensia. Buuggan oo leh ubaxyo cad quruxsan iyo caraf udgoon ayaa lagu wareeri karaa jasmine. Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay sababta ay u habboon tahay beeritaanka beerta jasmine iyo sida loo sameeyo. Waxaan sidoo kale tixgelin doonaa daryeelka saxda ah ee iyaga iyo noocyada dhalashada dhirta iyo wakhtiga sanadka marka ay tahay mid ku haboon in lagu beero weel-wejiga.
Tilmaamaha martida koraya ee beerta
Nashqada martigeliyaha martida ma aha oo kaliya caleemaha quruxda badan, laakiin sidoo kale for unpretentiousness. Weli, caleemo qurxin badan ayaa xaliya. Waxay abuuraan asal qurux badan oo qurux badan dhirta kale, iyo ubaxyada dhirta naftooda ayaa aad u xiiso leh. Ma taqaanaa? Khost wuxuu ka yimid magaca Laatiin Hosta wuxuuna leeyahay magac kale - qosol.
Jardinka Gerbera: beerashada iyo daryeelka
Gerbera waa geedka dilka ah ee qoyska Compositae. Waxaa jira noocyo badan oo ah gerberas, kuwaas oo lagu kala saaro midab, gogol iyo nooca inflorescence. Aan eegno su'aalaha ku saabsan inta hareeraha ah ee ubberas, sida loo abuuro loona daryeelo. The noocyada ugu caansan Gerbera beerta Maanta, 80 noocyo of this ubax qurux badan loo yaqaan.
Cudurada iyo cayayaanka ee begonias: sharraxaadkooda iyo hababka loola tacaalayo iyaga
Waxaa ka mid ah dhirta gudaha, begonia waa mid ka mid ah kuwa ugu jecel badan, sababtoo ah waxa la kala saaro ma aha oo kaliya ubax qurux badan, laakiin sidoo kale caleemaha aad u soo jiidasho leh. Laakiin daryeelka ee warshadani waxay u baahan tahay wax badan, sidaa darteed waxaan ka wada hadlaynaa cudurrada ugu caansan ee begonias iyo khaladaadka beeraha. Dhibaatooyinka ka yimaada begonias-ka ee xumaada sababo la xiriira xaaladaha sii kordhaya ee aan wanaagsanayn iyo daryeelkooda. Dhibaatooyinka ugu caansan ee leh begonias sii kordhaya ayaa sabab u ah xaqiiqda ah in ubaxa aan si haboon loo ilaalin.
Chrysanthemum - ubax samurai
Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa "ubax samurai" - bamam ah. Waxaan ka hadli doonaa sida loo daryeelo Bryaanka, sida ay u jeceshahay ciidda iyo inta jeer ee aad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta. Tixgeli cayayaanka suurtagalka ah oo bar in ay la dagaalamaan. Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo gaaro ubax leh raaxo of chrysanthemums. Ma taqaanaa?
Waa maxay miro-buka oo jiran iyo sida loo daaweeyo
Gooseberry waa ku filan adkaysi u cudurada iyo cayayaanka. Laakiin wuxuu la kulmay cuduro khatar ah. Cudurka mooska-shubanka waxaa lagu daaweyn karaa daryeel haboon, ka-hortag iyo koontarool ku salaysan. Macaan dhoobo: sida loo wajaho cudurka fungal Inta badan, cudurkan fangasku wuxuu u muuqanayaa miro yar oo ah qaabka ubaxyada caddaanka ah ee daboolaya buunshaha geedaha.
Cudurada iyo cayayaanka ee qaraha, dhibaatooyinka ugu weyn ee sii kordhaya
Qoob-hawleedka waxaa lagu qaadi karaa noocyo kala duwan oo fangas ah, cudurada bakteeriyada iyo cudurada viral, taas oo horseedi karta hoos u dhac ku yimaada dhalidda iyo tayada miraha. Cayayaanka kala duwan ee ku quudiya dheecaan ee dhirta ayaa sidoo kale keena waxyeello yar. Sidaa darteed, si aad u ogaato iyaga waa lagama maarmaan. Maanta waxaan eegnaa cudurada ugu caansan ee qaraha iyo sida loo daaweeyo, iyo sidoo kale ka hadal cayayaanka ee qaraha iyo sida loola dagaallamo.
Sida looga hortago oo loo daweeyo orchids cudurada
Maanta, orchid ma aha sida warshad dhif ah beerta beerta qolka. Hase yeeshee, waxay ku xiran tahay cuduro kala duwan waxayna u baahan tahay daryeel gaar ah. Nasiib darro, way adag tahay in la helo macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan dayactirka ubax, cudurada orchid iyo daaweyntooda. Sidaa daraadeed, waxaan isku deyeynay inaanu daboolno dhibaatooyinka guud iyo dhibaatooyinka soo koraya ee orchids.
Sida loola tacaalo cudurada BlackBerry
Guryaha dabiiciga ah ee madow, geedo leh ubaxyo leexsan iyo miro madow oo madow ah waa ballaaran - tani waa North America iyo Eurasia. Howlaha taranta ee ugu firfircoon ee beerista noocyo beerta ah ee blackberry ayaa la qabtey tan iyo qarnigii sagaalaad ee Maraykanka (in ka badan 300 oo noocyo ayaa la nadiifiyey). Caan ka ah this berry this in our dalkeena sii kordhaya - tirada sii kordhaysa ee bannaanka u bilaabaan in ay u mahadceliyaan blackberry iyada iyada: dhadhan macaan oo wacan; Qalabka daaweynta iyo nafaqada; dhalidda sare; aan qabyo ahayn iyo sahlanaanta daryeelka; Cadaadiska cudurka daciifka ah.
Cudurada strawberries: ka hortagga, calaamadaha iyo daaweynta
Iyadoo bilawga xagaaga, qof kasta oo si xamaasad leh u sugaya goosashada cayayaanka. Si kastaba ha ahaatee, strawberries waxay u nugul yihiin tiro badan oo cudurro ah, tallaabooyinka daaweynta waxay u baahan yihiin in la qaato waqtiga. Haddii kale, waxaa jira khatar ah in la sii hayo iyada oo aan la cuni karin. Maqaalkani wuxuu sharxayaa cudurrada dhirta ee ugu caansan, calaamadaha, hababka daaweynta iyo ka hortagga kuwaas oo kaa caawin doona inaad badbaadiso strawberries iyo ku raaxayso dhadhanka rabbaaniga ee midhihiisa.
Cudurada iyo cayayaanka ee cannas iyo sida loo wajaho
Kanna waa warshad jecel oo leh beeraley iyo beeraley leh ubax cajiib leh. Si kastaba ha noqotee, waxay dhacdaa in canna ay diiddo in ay ubaxdo, inkasta oo ay u muuqato in dhammaan shuruudaha lagama maarmaanka ah loo abuuray. Jawaabta su'aasha ah sababta keenta cannons ma aha ubaxu waxay ku kala duwanaan kartaa xaalad kasta oo gaar ah, laakiin sababaha caadiga ah waxay mar walba ku jirtaa daryeel qaldan.
Cudurada iyo cayayaanka ee "petunia": dhibaatooyinka ugu waaweyn ee sii kordhaya
Caleemo casri ah oo qurux badan oo qurux badan, inkastoo ay u adkaysato noocyada kala duwan ee cudurada iyo caadadiisu tahay inay koraan xaaladaha qoyaan iyo kuleylka sare, laakiin waxaan ku jirnaa beerta hore waa tijaabada dhabta ah. Inta badan cayayaanka iyo cudurrada waxay u galaan beerta iyo geedo, sidaas darteed haddii aad rabto inaad xayawaanka xayawaanka degto, waa inaad ogaataa wax yar oo ku saabsan sida loola macaamilo cudurro kala duwan iyo dulin.
Almond: daweynta wakhtiga cudurada iyo yaraynta cayayaanka
Almond - quruxda koonfureed leh ubaxyo qurux badan leh iyo midhaha ugu qiimaha badan. Warshadda almond waxaa loo soo bandhigaa labadaba qaababka geedo dheer iyo dhir. Dhirta Almond tan iyo wakhtiyadii hore ayaa koray dadka, iyo xusuusta ugu horeysa ee yaryar waxaa laga helay qoraallada reer Asxaabta ah iyo Kitaabka Qudduuska ah. Si kastaba ha noqotee, cuntadu looma adeegsan karo midhaha badankooda, laakiin lafaha iyaga oo keliya.
Sida loo ilaaliyo cudurka laga bilaabo cudurka
Midkeen kastaaba wuxuu jecel yahay in uu lahaado geed qoyan qurxoon Si kastaba ha ahaatee, geedkan waa mid furfuran waxaana ku xiran cuduro badan. Si aad u korto geed qurux badan, dhaadheer, jilicsan, waxaad u baahan tahay inaad sameyso dadaal badan. Waxa ugu muhiimsan waa daryeelka saxda ah. In this article waxaan ka fiirsan doonaa waxa sababi kara cudurro iyo cudurro ee quruxda kaynta ku cuneen.
Sifooyinka Brugmansia sii kordhaya ee berrinka bannaan
Xilliga xagaaga ee jardiinooyinka qaarkood waxaad ogaan kartaa dhir aan caadi ahayn oo u eg dope - leh ubax qurux badan iyo caraf xoog leh. Beedka geedkan - Brugmancia, oo ah shisheeye ka soo jeeda Koonfurta Ameerika. Brugmansia waa mid aad u madaxtooyada, iyo xitaa bannaanka u janjeera ay awoodaan inay beeraan oo daryeelaan ee berrinka bannaan.
Cudurada raspberry khatarta ah: ka hortagga, calaamadaha iyo daaweynta
Inkasta oo ay ku dadaalayaan in ay horumariyaan noocyo raspberry kuwaas oo u adkeynaya cudurrada iyo fayrasyada, dhirta ayaa weli ah kuwo u nugul iyaga. Maqaalkani wuxuu sharaxayaa cudurrada dhirta ugu caansan, calaamadaha iyo qaababka xakamaynta. Anthpberry Anthracnose Anthracnose waa fungus kaas oo u muuqda inuu dhibco kuusay dhoobo raspberry ah.
Sida loo daryeelo kala-soocidda guriga
Clivia, ama Kaffir Lily, waxaa iska leh qoyska Amaryllis. Cuntadani inta badan ee duurjoogta ah waxaa laga helaa dhulka Koonfur Afrika, maanta oo kaliya saddex nooc oo warshadaan ah ayaa la yaqaan. Iyadoo ay sabab u tahay tayada qurxinta, aan qabyo ahayn iyo fudaydka daryeelka, clivia waa mid aad u caan ah beerta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qamadi ciriiri 2019